1 Samuel 21 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Samuel Nhoma a Edi Kan 21:1-15
Dawid dii paanoo a wɔde kyerɛ no wɔ Nob (1-9)
Dawid yɛɛ ne ho sɛ ɔbɔdamfo wɔ Gat (10-15)
21 Akyiri yi, Dawid kɔɔ ɔsɔfo Ahimelek nkyɛn wɔ Nob.+ Bere a Ahimelek huu Dawid no, ne ho popoe, na obisaa no sɛ: “Adɛn nti na wo nko ara wonam a obiara nka wo ho yi?”+ 2 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ ɔsɔfo Ahimelek sɛ: “Ɔhene asoma me sɛ menkɔyɛ biribi, nanso waka akyerɛ me sɛ, ‘Mma obiara nnhu nea enti a meresoma wo, ne ɛho akwankyerɛ a mede ama wo no.’ Me ne mmerante no ahyehyɛ sɛ yebehyia wɔ baabi. 3 Na afei, sɛ wowɔ paanoo anum anaa biribi foforo biara a, mesrɛ wo, fa ma me.” 4 Nanso ɔsɔfo no ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Minni paanoo biara wɔ hɔ, gye paanoo kronkron+ no. Sɛ mmerante no atwe wɔn ho afi mmea ho nko ara de a,* metumi de ama wo.”+ 5 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ ɔsɔfo no sɛ: “Yɛatwe yɛn ho afi mmea ho sɛnea bere biara a mɛkɔ ɔko no, meyɛ no.+ Sɛ ɛnyɛ ade kronkron na yɛrekɔyɛ mpo a, ɛyɛ a mmerante no ho tew, na kampɛsɛ ɛnnɛ a ɛsɛ sɛ wɔn ho tew.” 6 Ɛnna ɔsɔfo no de paanoo kronkron no+ maa no, efisɛ na paanoo biara nni hɔ sɛ paanoo a wɔde kyerɛ a wɔayi afi Yehowa anim no. Saa da no, na wɔayiyi de paanoo a wɔatõ no foforo agu hɔ. 7 Ná Saul nkoa no mu baako, Edomni+ Doeg+ wɔ hɔ saa da no. Ná wɔahyɛ no sɛ ɔntena Yehowa anim. Ɔno na na ɔyɛ Saul nguanhwɛfo so panyin. 8 Ɛnna Dawid bisaa Ahimelek sɛ: “Wowɔ peaw anaa sekan wɔ ha? Mamfa me sekan ne m’akode ankura, efisɛ na ehia sɛ midi ɔhene asɛm no ho dwuma ntɛm.” 9 Na ɔsɔfo no kae sɛ: “Filistini Goliat+ a wukum no wɔ Ela Bon mu*+ no sekan no ni. Ɛno na wɔde ntama akyekyere ho wɔ efɔd*+ no akyi no. Sɛ wopɛ a, fa, efisɛ ɛno nkutoo na ɛwɔ ha.” Dawid kae sɛ: “Ɛso bi nni hɔ. Fa ma me.” 10 Saa da no, Saul nti, Dawid sɔre toaa so guanee,+ na okoduu Gat hene Akis+ nkyɛn. 11 Na Akis nkoa ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛnyɛ Dawid, asaase no so hene no ni? Ɛnyɛ oyi na wɔde nnwom ne asaw bɔ gyee no so sɛ,‘Saul akum apem,Na Dawid akum mpem du’ no?”+ 12 Dawid de nsɛm yi siee ne koma mu, na Gat hene Akis nti, ehu kaa no paa.+ 13 Enti ɔyɛɛ ne ho sɛ ɔbɔdamfo+ wɔ wɔn anim, na odii abɔdamsɛm wɔ wɔn mu.* Ná ɔkyerɛkyerɛw kurow apon no ho, na na ɔma ne ntasu sian fa n’abogyesɛ mu. 14 Ɛnna Akis ka kyerɛɛ ne nkoa no sɛ: “Moahu sɛ ɔbarima yi abɔ dam, enti adɛn na mode no abrɛ me? 15 Adɛn, mihia abɔdamfo nti na mode oyi abrɛ me sɛ ommedi abɔdamsɛm nkyerɛ me anaa? Ɔbarima yi de, ɔrebɛpɛ dɛn wɔ me fi?”
^ Anaa “Sɛ mmerante no ne mmea nnae a.”
^ Anaa “Asaasetraa so.”
^ Ɛyɛ ataade bi a na asɔfo hyɛ gu wɔn ntaade so. Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
^ Nt., “wɔ wɔn nsam.”